Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: तीन सातामा मात्रै रुपैडियानाकामा १२ जना नेपाली लुटिए !
तीन सातामा मात्रै रुपैडियानाकामा १२ जना नेपाली लुटिए !
बाँके/भारतमा काम गरेर फर्किएका नेपाली फेरि लुटिएका छन्। दिल्लीमा काम गरेर घर फर्किरहेका रोल्पा डुबि्रङ-७ का खुमबहादुर थापा यात्राका क्रममा बसमा लुटिएका हुन्। मंगलबार बिहान ११ बजे रुपैडियाको चौराहामा थापा बेहोस अवस्थामा भेटिएका थिए। उनको जमुनाहा प्रहरीको सहयोगमा नेपालगन्जको भेरी अाचल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। लुटेराले थापालाई बसभित्र पानीजन्य पदार्थमा विषादी मिसाई खुवाएर नगद लुटपाट गरेको बताइएको छ। उनी नाम ठेगानासमेत भन्न नसक्ने अवस्थामा छन्। तर साथमा नागरिकता रहेकाले उनको नाम ठेगानासम्म खुलेको जमुनाहा प्रहरीले बताएको छ। बेहोस अवस्थामै रहेकाले उनको के-कति नगद तथा सामान लुटियो भन्ने खुलेको छैन। रुपैडियाको चौराहामा बेहोस अवस्थामा रहेका थापाको साथमा एउटा झोला थियो। भारतीय अधिकारीले नेपाली युवा चौराहामा बेहोस अवस्थामा रहेको जानकारी दिएपछि जमुनाहा चौकीबाट प्रहरी गएर थापाको उद्धार गरेको हो। बाँकेका प्रहरीप्रशासन प्रमुखले भारतीय उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर चाडबाड तथा अन्य बेला पनि यात्राका क्रममा नेपालीहरुलाई लुटिनबाट बचाउने अभियान थाले पनि नेपालीहरु लुटिने क्रममा रोकिएको छैन। जमुनाहा प्रहरीका अनुसार असोजको तीन सातामा मात्रै यो नाकामा १२ जना नेपाली लुटिएका छन्। तीमध्ये नौ जना बेहोस
अवस्थामा उद्धार गरिएका हुन्।
लुटिएर बेहोस अवस्थामा बस अड्डा तथा टाँगा स्टेसनमा अलपत्र पर्ने नेपालीलाई जमुनाहा प्र्रहरीले उद्धार गरेर भेरी अंचल अस्पतालसम्म पुर् याउने गर्दछ। उपचारपछि पीडितहरु रित्तो हात घर फर्किने गर्दछन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार असोज ३ गते सल्यानका वीरबहादुर बुढा र देवीलाल बुढा बेहोस् अवस्थामा रुपैडियामा भेटिए। प्रहरीको सहयोगमा भेरी अंचल अस्पतालमा उपचार भएपछि उनीहरु घर फर्किए। कसले कति पैसा तथा जिन्सी लुट्यो भन्ने यकिन भएन।
असोज ५ गते मात्रै ४ जना बेहोस अवस्थामा रुपैडियामा भेटिएका छन्। सुर्खेतका हस्तबहादुर खड्का छिन्चुका खगेन्द्र खड्का सुर्खेतका दीपककुमार थापा र सल्यानका रुद्रबहादुर पुन बेहोस अवस्थामा भेटिएका हुन्। होसमा आएर उनीहरुले दिएको जानकारीअनुसार नेपाली मूलका युवाहरुले सँगै टिकट काटेर एउटै सिटमा बसेर बीच बाटोमा विषादी हालेको खानेकुरा दिएर लुटपाट गरेका हुन्। जमुनाहा प्रहरीका अनुसार हस्तबहादुरको ७ हजार खगेन्द्रको १५ हजार दीपकको २७ हजार भारतीय रुपियाँ लुटियो।
त्यस्तै आठ गते जाजरकोटका धर्मबहादुर शाही र प्रेमबहादुर शाही लुटिए। उनीहरु पनि बेहोस अवस्थामै रुपैडियामा थिए। पीडितका अनुसार प्रेमको १४ हजार भारतीय रुपियाँ लुटिएको थियो। बस रेल टाँगामा यात्रा गर्ने मात्र होइन रुपैडियामा आइसकेपछि भारतीय प्रहरीले समेत नेपालीबाट जबरजस्ती पैसा असुल्ने गरेको बताइन्छ। असोज २ गते दाङका तीन जना युवाको भारतीय अधिकारीले जबरजस्ती ५/५ हजार भारतीय रुपियाँ भारतीय प्रहरीले लगेको जमुनाहा प्रहरी चौकीमा निवेदन परेको छ।
यात्राका क्रममा नचिनेका मानिसले दिएको खानेकुरा खानुहुँदैन भन्ने जानकारी भए पनि नेपालीहरु लुटेराको विश्वासमा परेर उनीहरुले दिएको खानेकुरा खाँदा आफैं लुटिने गरेको जमुनाहा प्रहरीको विश्लेषण छ। सँगै टिकट काटेर यात्रा गर्ने र बाटोमा कुराकानी गर्दै आउने तथा मौका मिल्नसाथ विषादी मिसिएको खानेकुरा खुवाएर लुट्ने योजनामा गिरोहहरु लाग्ने गरेको पीडितहरुको कुरा सुन्दा लाग्छ’ प्रहरी सहायक निरीक्षक भागीरथ चन्दले भन्नुभयो।